ठूलो सजिलो | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त! ठूलो सजिलो | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त!
यदि तपाईं संगीत प्रेम, विशेष ज्याज संगीत त तपाईं पक्कै पनि प्रेम पर्नु हुनेछ ठूलो सजिलो स्लट खेल. यो के तपाईं स्लट साइट जीत राख्न ज्याज रात क्लब मा लोकप्रिय कुरा थियो जब खेल पुराना युग मा आधारित छ. यो खेल ती सुनको वर्ष को एक झलक दिनको तत्व विशेषताहरु. तपाईं मानक पाँच रील र तीन पङ्क्ति संग यहाँ प्ले गर्न सक्नुहुन्छ 20 शर्त रेखाहरू तपाईं आफ्नो प्राथमिकता अनुसार समायोजन गर्न सक्ने. त्यहाँ संगीत प्रशस्त तपाईं प्ले गर्दा आनन्द उठाउन सक्छौं कि ट्रकहरु छन्. को रील को क्लब बाहिर नियन आभा signboards छ कि सडक एक दृश्य संग सेट. यहाँ सट्टेबाजी एक मात्र £ 0.01 सुरु र तपाईं £ 100 हरेक स्पिन आफ्नो stakes बढाउन सक्छ.
ठूलो सजिलो विकासकर्ता बारेमा
यो रंगीन ज्याज थिम्ड के तपाईं स्लट साइट जीत राख्न खेल igt विकास भएको थियो. तिनीहरूले लोकप्रिय स्लट खेल सयौं लागि धेरै प्रसिद्ध हो र संख्या बस प्रत्येक हप्ता ठूलो बढ्दै छन्. तिनीहरूले पनि प्रतिष्ठित सूचीबद्ध छन् NASDAQ र NYSE क्यासिनो खेल आफ्नो सफलता र समर्पण देखाउँछ कि.
यो के तपाईं स्लट साइट जीत राख्न खेल खेलाडी गर्न भिजुअल र सांगीतिक व्यवहार प्रदान गर्दछ. यहाँ प्रतीक एक सुन्दर युवती गायन हुन्छन्, एक मानिस तुरही उड्ने, पियानो र एक सेक्सोफोन देखि कुञ्जीहरू. गायक पचास पटक संग शीर्ष तिर्ने प्रतीक आफ्नो कुल wagered रुपैया मा दिन्छिन् छ. कम तिर्ने व्यक्तिहरूलाई mussels र झींगा को एक प्लेट छन्, व्हिस्की एक गिलास, प्रत्यक्ष कन्सर्ट आमन्त्रण, बत्ती पोस्ट र सडक. तपाईं बोनस खेल लोगो र आधा चन्द्र एक तस्वीर हो देखि जीत मदत गर्न प्रतीक.
स्क्याटर बोनस: चन्द्र को प्रतीक यो को स्क्याटर सुविधा छ के तपाईं स्लट साइट जीत राख्न खेल. तीन र पाँच landings बीच, तपाईं 20x शर्त multipliers गर्न 4x जित्न सक्छौं.
जंगली बोनस: खेल लोगो को प्रतीक जंगली छ र यो स्क्याटर प्रतीक बाहेक सबै को लागि कवर. तपाईंलाई आफ्नो शर्त मात्रा मा 50X को एक विशाल इनाम दिन एक payline मार्फत पाँच wilds.
फ्री spins: जंगली को प्रतीक पनि यो खेल केही मुक्त spins जीत मद्दत गर्छ. जंगली तीन पाँच अवतरण संग, तपाईं 2x र 10x बीच जीत multipliers साथ आठ बीस-पाँच मुक्त spins जित्न सक्छौं.
सारांश: विभिन्न रोमाञ्चक बोनस र scintillating ग्राफिक्स संग, यो के तपाईं स्लट साइट जीत राख्न खेल तपाईं ठूलो जीत मद्दत गर्छ. संगीत साँच्चै यो खेल मा Entertaining छ र पनि यसको ट्युन गर्न आराम गर्न सक्छन्.